Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) Isticmaalayaasha budada - Phcoker
Xavi Ibutamoren Mesylate (MK677) budada (159752-10-0)
Ibutamoren Mesylate (MK677) budada, oo loo yaqaan MK677, MK-677, MK-0667, iyo L-163,191, ...... ..
Capacity: 1249kg / bishii
Daawo Ibutamoren Mesylate (MK677) budada (159752-10-0) video
Dufanka Ibutamoren Mesylate (MK677) waa daawo u shaqeeya sidii hormar xooggan oo hormarsan oo hormarsan oo hormoonada hormoonka ah, oo la jahawareeriyo ficil-galinta GH-kicinta hormoonka hormoonka ah ee ghrelin. Waxaa la muujiyey in la kordhiyo sii-deynta, waxayna soo saartaa kororka joogtada ah ee heerarka plasma ee hormoonno dhowr ah oo ay ka mid yihiin hormoonada koritaanka iyo IGF-1, laakiin iyada oo aan saameynin heerarka cortisol. Waqtigan xaadirka ah wuxuu ku jiraa horumarka daaweynta suurtagalka ah ee hoos u dhaca heerarka hormoonnada, sida koritaanka hormoonka koritaanka hormoonada ama waayeelka waayeelka, iyo barashada bini-aadamka ayaa muujisay inay kordhinayso cufnaanta muruqyada iyo lafaha miyirka labadaba, taasoo ka dhigeysa daaweyn balanqaad ah daaweynta xanaaqa waayeelka. Kalluunka MK-677 ayaa sidoo kale wax ka beddelaya dheef-shiid kiimikaad jidhka ah sidaa daraadeed waxaa laga yaabaa in uu codsado daaweynta buurnaanta.
Xavi Ibutamoren Mesylate (MK677) budada (159752-10-0) Smamnuucista
Product Name Root Ibutamoren Mesylate (MK677) budada
Magaca Kiimikada MK-677;2-Amino-N-[(1R)-2-[1,2-dihydro-1-(methylsulfonyl)spiro[3H-indole-3,4′-piperidin]-1′-yl]-2-oxo-1-[(phenylmethoxy)methyl]ethyl]-2-methylpropanamide methanesulfonate;
Fasalka Daroogada Budada MK677
Molecular Wsideed 624.768 g / mol
Dhibicda Biyaha 161 ilaa 315ºC
karisaaning Psaliid 868.9 ° c at 760 mmhg
SOlubility H2O: Soluble5mg / mL, cad
Ibutamoren Mesylate Application Hormoonka koritaanka hormoonka sii deynaya; waxay bedeshaa dheef-shiid kiimikaad; kor u kaca muruqyada iyo lafaha maadada lafaha; wuxuu beddelaa dheef-shiid kiimikaad
Raw Ibutamoren Mesylate (MK677) budada (159752-10-0)
Ibutamoren mesylate (oo sidoo kale loo yaqaanno ibutamoren ama MK677), waxay kor u qaadeysaa dheecaanka hoormoonka koritaanka (GH) waxaana uu kordhiyaa saameeynta insulin-kobaca sida 1 (IGF-1).
Ibutamoren mesylate waxay kordhisaa heerarka hoormoonka koritaanka iyada oo la jaanqaadka ficil-celinta hormoonka hormonka iyo ku xiran mid ka mid ah dukaamada ghalelka (GHSR) ee maskaxda. GHSR-ka firfircoon wuxuu kobciyaa hormoonka koritaanka hormoonka maskaxda.
GHSR waxaa laga helaa gobollada maskaxda ee xakameynaya rabitaanka cuntada, raaxeysiga, niyadda, qiyaasaha noolaha, xasuusta, iyo garashada. Sidaa daraadeed, waxaan filan karnaa in ibutamoren mesylate ay saameyn karto shaqooyinkan. Hase yeeshee, illaa imika, daraasaddaha kiliinikada waxay qeexayaan kaliya saameynta ibutamoren mesylate leeyahay rabitaanka cuntada - iyo sida la filayo, sida ghrelin, mesutat ibylamoren mesylate waxay kordhisaa.
Waxyaabo weyn oo ku saabsan ibutamoren mesylate waa in ay kordhiso heerarka hoormoonka koritaanka iyada oo la yareynayo ama aan la kordhinin hormoonnada kale, sida cortisol. Cortisol wuxuu xakameynayaa habka difaaca jirka, wuxuu yareynayaa bogsashada boogta, wuxuuna waxyeelaa barashada iyo xasuusta, waxaana badanaa aan fiicneyn in uu hormoonkan kor u kaco.
Xavi Ibutamoren Mesylate (MK677) budada (159752-10-0) Habka Wax-qabadka
Ibutamoren mesylate (oo loo yaqaan 'ibutamoren' ama 'MK-677'), waxay kor u qaadeysaa dheecaanka hoormoonka koritaanka (GH) wuxuuna kordhiyaa saameeynta insulinta sida koritaanka 1 (IGF-1).
Faa'iidooyinka koollada Ibawamororen Mesylate (MK677) (159752-10-0)
♦ MK677 Waxay Caawinaysaa Cufnaanta Lafaha
♦ MK677 Caawinta Kobcinta Kobaca Muruqyada
♦ MK677 Waxay Caawisaa Dhimista Maskaxda
♦ MK677 Waxay Caawinkartaa Hurdada
♦ MK 677 Waxay yareeyn kartaa Saameynta Waayeelka
♦ MK677 wax saameyn ah kuma yeelan karto Maskaxda
Maqaarka Ibutamoren Mesylate (MK677) ayaa lagu taliyay (159752-10-0) Qiyaasta
Iyadoo lagu saleynayo cilmibaarista, 20 ilaa 30mg waxay u muuqataa inay tahay qiyaasta ugu fiican. Waxaa jira warar sheegaya in dadku qaataan wax ka badan 30mg of MK677 maalin, laakiin ma aysan keenin natiijooyin wanaagsan. Maxay ka muhiimsan tahay qiyaasta qiyaasta dhererka wareegga.
Aad bay muhiim u tahay in MK677 la qaado waqti dheer. Heerarka hormoonka koritaanka waa in ay si tartiib tartiib ah kuugu dhisaan jirkaada, kuwaas oo qaadan kara ilaa dhowr toddobaad inta aanad bilaabin inaad dareento saameynta.
Dhibaatooyinka kale ee ka yimaada budada Ibawamoren Mesylate (MK677) (159752-10-0)
MK677 ma aysan soo bandhigin waxyaabo badan oo saameyn badan leh oo ay isticmaalayaasheedu ka walaacsan yihiin, laakiin dadka qaarkood ayaa laga yaabaa inay yeeshaan saameyno qaar ka mid ah raadinta. Shakhsiyaadka u nugul dareenka insulin ama kuwa qaba sonkorowga ayaa halis ugu jira inay qaataan MK677. Calaamadaha la xidhiidha xaaladahaan waxaa dhici karta in ay sii xumeeyaan isticmaalka MK677. Iyadoo la tixraacayo daraasad horey loo soo sheegay, dadka waayeelka ah ee hore u lahaa xaalad wadnaha ah ayaa halis ugu jira qaliin wadnaha ah marka la isticmaalo MK677. Haddii kale qof caafimaad qaba, uma muuqato wax saameyno waxyeelo leh oo laga helay, laakiin cilmi baaris dheeraad ah ayaa mar walba loo baahan yahay si loo hubiyo macaamiisha taas.
Dufanka N-Methyl-D-aspartic acid (NMDA) budada (6384-92-5)